Farmaajo oo u dhoofay Dalka Qatar iyo ujeedka socdaalkiisa oo la ogaaday - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Farmaajo oo u dhoofay Dalka Qatar iyo ujeedka socdaalkiisa oo la ogaaday - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta u dhoofay magaalada Dooxa ee dalka Qatar.
Farmaajo ayaa la sheegay inuu martiqaad ka helay Amiirka Dowladda Qatar Sheekh Tamiim Bin Xamad Al Thaani, kaasoo ku saabsan ka qeyb galka xaflada furitaanka Koobka Kubadda Cagta ee Carabta (FIFA Arab Cup Qatar 2021) oo Talaadadda Berri ka furmaya magaalada Doha.
Waxaa kaloo xafladda fuirtaanka tartanka Koobka Kubadda Cagta ee dalalka Carabta ka qeybgeli doona madax carbeed oo lagu casuumay, iyadoo lagu wado in inta uu joogo dalka Qatar uu kulan-doceedyo la yeesho qaar ka mida madaxda xaflada ka qeyb galeysa.
Socdaalka waxaa Farmajo ku wehliya Wasiirka Arrimaha Dibadda Cabdisaciid Muuse Cali, Wasiirka Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Xamsa Siciid Xamsa iyo Guddoonka Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliyeed Mudane Cabdiqani Saciid Carab.
Previous articleAlshabaab oo baahisay Magaca iyo Jufada Is-miidaamiye kasoo jeeda Beesha Mareexaan oo isku qarxiyey..
Next articleSaddex Kursi oo lagu doortay magaalada Baydhaba iyo Xildhibaan u soo baxay Mucaaradka